Mpamatsy haingo fotsy 10Inch fotsy tsara indrindra | Rayson
Rayson any amin'ny faritra indostrialy Rayson, làlana Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Sina. Vokatra lehibe mpamatsy volomboasary fahatsiarovan-tarehy 10Inch fotsy
Ity vokatra ity dia tena manohitra ny bakteria. Ny fitaovany manasongadina ny fananana mando hamandoana dia afaka manampy amin'ny fomba mahomby amin'ny fisorohana ny fitomboan'ny mikraoba miteraka fofona amin'ny tongotra.
Rayson Global Co., Ltd dia fiaraha-miombon'antoka Sino-US, natsangana tamin'ny 2007 izay miorina ao amin'ny Shishan Town, Foshan High-Tech Zone, ary miorina akaikin'ny orinasa malaza toa an'i V
Hatreto, Rayson dia nandany ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena. Ny vokatra rehetra ao anatin'izany ny vokatra vaovao dia omena endrika vaovao, kalitao azo antoka ary vidiny mifaninana. Taorian'ny taona maro nivoarana dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifantsika izahay manerantany. Azafady mba matokia fa zonay ny manondrana ny vokatray ary tsy hisy ny simba amin'ny entana aterina. Raisinay an-tsitrapo ny fanontanianao sy ny antsonao. Miaraka amin'ny tsipika famokarana feno sy mpiasa efa za-draharaha, Rayson dia afaka manamboatra tsy miankina, mivelatra, manamboatra ary mizaha toetra ny vokatra rehetra amin'ny fomba mahomby. Mandritra ny fizotrany rehetra, ny matihanina QC dia hanara-maso ny fizotrany tsirairay mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ankoatr'izay, ny fandefasana anay dia ara-potoana ary afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa tsirairay. Mampanantena izahay fa ny vokatra dia alefa any amin'ny mpanjifa azo antoka sy milamina. Raha manana fanontaniana ianao na te hahafantatra bebe kokoa momba ny, dia antsoy izahay mivantana. Hatramin'ny niorenany, Rayson dia mikendry ny hanome vahaolana miavaka sy mahavariana ho an'ny mpanjifanay. Nanangana ny R izahay& ivon'ny famolavolana ny vokatra sy ny fampandrosoana ny vokatra. Izahay dia manaraka tsara ny fizotran'ny fanaraha-maso kalitao mahazatra mba hahazoana antoka fa mifanaraka na mihoatra ny vinan'ny mpanjifanay ny vokatra. Ho fanampin'izay, manome serivisy aorian'ny varotra ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao izahay. Ireo mpanjifa izay te hahafantatra bebe kokoa momba ny vokatra vaovao na ny orinasanay, mifandraisa aminay fotsiny.
Inona avy ireo fomba fandoavam-bola ekenao? LC amin'ny fahitana / avy amin'ny TT, Deposi 30% ary fifandanjana 70% dia mifanohitra amin'ny kopian'ny antontan-taratasy fandefasana witinin 7 andro fiasana. Ahoana no famoahana kidoro? 1. Apetaho amin'ny baoritra ao amin'ny efitranonao ny baoritra, esory tsara ny kidoro ary apetraho eo am-pandrianao. 2. Sasao tsara amin'ny kitapo ivelany ny kitapo ivelany mba hahazoana antoka fa tsy hanapaka ny plastika ratsy ao anatiny na ny kidoro, aza mitaky antsy. 3. Esory eo ambony fandrianao ilay kidoro nasiana tombo-kase 4. Tapaho tsara ny kitapo plastika miaraka amin'ny famantaranandro rehefa manomboka mamoaka volo avy eo ilay kidoro, esory ny kitapo plastika. 5.Avelao hanitatra 24 ora ny kidoro anao vaovao. Azoko atao ve ny mitsidika ny orinasa misy anao? Eny, tongasoa eto hitsidika ny orinasanay amin'ny fotoana rehetra, eo akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Guangzhou Baiyun izahay, maharitra adiny iray amin'ny fiara fotsiny, ary afaka mandamina fiara haka anao izahay.
Biby matotra bonnell lohataona mpamatsy ambony indrindra
Mpanjarija tsara indrindra amin'ny haben'ny toekarena amin'ny habakabaka tsara indrindra
Fampiroboroboana matihanina amin'ny vidiny vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny mpanamboatra boaty